I-input - ukungeniswa kolwazi - Wikipedia
I-input - ukungeniswa kolwazi
(Redirected from Ulwazi)
Igama elithi ''ulwazi'' lisetyenziswa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo. ngokwentsusa, livela kwigama elithetha ukunika indlela okanye uhlobo oluthile kwinto ethile. Ulwazi] yinto enokufundwa ngabantu, enokwaziwa okanye enokuqondwa ngabantu. Umzekelo, iphephandaba liqulethe ulwazi ngehlabathi. eli phepha liqulethe ulwazi malunga no''lwazi''.
lo ngumqondiso usenokufumaneka kwiindawo apho kukho ulwazi oluthe chatha malunga nesihloko okanye malunga naloo nto kuthethwa ngayo.
Iulwazi olukwinzululwazi yecompyuthaEdit
abantu abasebenzisa iikhompyutha basoloko besebenzisa igama elithi ulwazi neli lithi data ngokufanayo. Kukho amasebe emfundo ekuthiwa '' information science" ne"information technology" (IT).
ngeminyaka yoo- 1970 neyoo-1980, abanye abantu beza nenye intsingiselo ethe ngqo ngo''lwazi''. ngelo xesha, uvimba wolwazi kwikhompyutha waye sele akhiwe, ulwazi luthetha uhlobo lolwazi oluthile olungakhange luphononongwe. Oko kuthetha okokuba ulwazi aluzange lutshintshwe okanye lulungiswe, kwaye ke alunakuthenjwa. Ngokwale ntsingiselo intsha, ulwazi luthetha ulwazi oluphononongiweyo, lwaze lwaphumelela uvavanyo ngento olumelwe kukuba yiyo. Umntu angathemba okokuba ''ulwazi'' lulungile.
Ulwazi lungalungiswa kwaye lungakulungela ngakumbi ukuthenjwa xa kunokuba kho iindlela ezilungileyo nezipheleleyo zokuphonononga olu lwazi. (ukujongwa nokuphononongwa kolwazi, validation okanye iverification) kuze emva koko kwenziwe isigqibo sokokuba lukulungele ngokwaneleyo na (ukuba lufakwe kwinkqubo yokwamkelwa. umntu kufuneka ayazi imithetho esetyenzisiweyo xa kuphononongwa ulwazi, okanye loo mntu ophonononge ulwaze abe ngumntu othembakeleyo. Ukuba umntu akanakutsho okokuba oku kweenziwa, ulwazi lubonakala iselulwazi lwaloo mntu, ukuze loo mntu aluphonononge ulwazi kwakhona, kuloo mbono uphangaleleyo ngolwazi.
Last edited on 3 Eyo Mnga 2020, at 05:02
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-3 Eyo Mnga 2020, kwi-05:02